Ababoneleli beWasha kunye neFactory-abavelisi beWasha baseTshayina
I-DIN125 iwasha eflethi yekhabhoni yentsimbi evulwe ngePlayiti eGalvanized.
I-DIN125 iwasha yentsimbi yekhabhoni
I-Flat pad yenziwe ikakhulu nge-iron sheet stamping ngaphandle, imilo ngokubanzi yiwasha emcaba, kukho umngxuma phakathi.Yandisa indawo yoqhagamshelwano phakathi kwesikrufu kunye nomatshini.Ukuphelisa umonakalo we-spring pad kumphezulu womatshini xa ukhulula izikrufu.Kufuneka isetyenziswe kunye ne-spring pad kunye ne-flat pad, kunye ne-flat pad ecaleni komphezulu womatshini kunye ne-spring pad phakathi kwe-flat pad kunye ne-nut.
Iwasha yeZinc ePlated Spring yaseNtwasahlobo ye-DIN128Fasteners Fasteners, iWashers yesitshixo, iWashers zentsimbi eCwangcisiweyo ezinamandla aphezulu, iGasket, iFlet Washers, iSpring washers
Izixhobo zokuhlamba zasentwasahlobo zisetyenziswa ngokubanzi kwizakhiwo zokuthwala kunye nezingathwaliyo kwiimveliso zoomatshini ngokubanzi.Zibonakaliswa ngeendleko eziphantsi kunye nofakelo olufanelekileyo, kwaye zifanelekile kumacandelo anendibano rhoqo kunye ne-disassembly.I-washer yasentwasahlobo kwishishini le-screw, elidla ngokubizwa ngokuba yi-spring gasket.Yenziwe ngensimbi engenasici kunye ne-carbon steel, eyintsimbi.
Iwasha yasentwasahlobo idityaniswe ngaphantsi kwe nut ukuyinqanda ukuba ingakhululeki.
Igasket ecaba, eyenziwe ikakhulu ngentsimbi, ikwimo yegasket esicaba enomngxuma embindini.
Yandisa indawo yoqhagamshelwano phakathi kwesikrufu kunye nomatshini.Ukuphelisa umonakalo we-spring pad kumphezulu womatshini xa ukhulula izikrufu.Kufuneka isetyenziswe kunye ne-spring pad kunye ne-flat pad, kunye ne-flat pad ecaleni komphezulu womatshini kunye ne-spring pad phakathi kwe-flat pad kunye ne-nut.
I-Springwashers isetyenziswa ngokubanzi kwizakhiwo ezithwala imithwalo kunye nezingathwaliyo kwiimveliso zoomatshini ngokubanzi.Zibonakaliswa ngokufakela okufanelekileyo kwaye zilungele iinxalenye ezinokufakwa rhoqo kunye nokuqhaqha.Iiwasha zasentwasahlobo kwishishini le-screw, elidla ngokubizwa ngokuba zii-gaskets zasentwasahlobo.